နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Network Hacking အကြောင်းတစေ့တဇောင်း
Network Hacking ဆိုတာ ယေဘူယအားဖြင့် Net work အတွင်းမှာ ဖျက်သန်းသွားလာနေတဲ့ Data တွေ
ချိပ်ဆက်ထားတဲ့ computer တွေ Sever တွေ domain တွေရဲံ information တွေကိုusing tools like Telnet, NslookUp, Ping, Tracert, Netstat, etc. စသည်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ စန်စ ကျကျ နဲ့ အသုံးချ HACK လုပ်တာပါ
OS Fingerprinting, Port Scaning and Port Surfing တွေစသည် tool တွေကို အသုံးပြီးတော့ အခြားသူတွေရဲ့
computer တွေကို ထိန်းချုပ်တာပါ ဒီသင်ခန်းစာမှာ command တွေ နဲ့ ပက်သက်တာတွေကိုပဲဖော်ပြပေးပါမယ်
Ping :- ဆိုတာက ICMP (Internet Control Message Protocol) တွေTCP/IP networks တွေကို သင်ခန်းစာတွေမှပါတဲ့troubleshoot လုပ်တာတို့ အခြေခံကျပြီးအထောက်အကူပြုတဲ့ command ပါ
ဒါအပြင် website တွေ၇ဲ့host ip တွေကိုလည်း ထုပ်ဖော်ပြသပါတယ်
ဒါအပြင်'Ping' command တွေနဲ့ အခြား Network command တွေနဲ့ တွဲသုံးလို့ရပါတယ်
Netstat :- TCP/IP တွေetwork connections. i.e. local address, remote address, port number, etc.
တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှူတွေမှာ အသုံးဝင်ပါတယ် c:/>netstat -n
Telnet :- Telnet ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှူဟာ program နဲ့အတူruns နေတဲ့ TCP/IP. ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှတစ်လုံးကိုconnect လုပ်ပေးတဲ့ particular port. တွေပါ ပုံမှာပြထားတဲ့ grabs တွေဟာ runနေတဲ့ portတွေပါ
example:- c:/>telnet www.yahoo.com 21 or c:/>telnet 192.192.168.0.5 21
Tracert :- ကိုအသုံးပြုပြီးတော့route ကနေ ယူဆောင်လာတဲ့information i.e. data packets from source to destination. တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် Trace လိုလို့ရပါတယ်စာဖတ်သူတို့တွေကြားဖူးမှာမှာ ip နောက် trace လိုက်တယ်ဆိုတာ ဒါက network track လိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်
Here "* * * Request timed out." အဲ့ဒါက firewall installed လုပ်ထားတဲ့ စက်တွေ sever တွေမှာ system တွေရဲ့ IP address. တွေကိုblock လုပ်ထားတာကိုပြတာပါ ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်ချင်သူတွေ firewall ကိုဖျက်ဆီးပစ် ဖို့လိုပါတယ် c:/>tracert ကို အသုံးပြုပြီးပြီးတော့target system တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
wifi hacking နဲ့ ပက်သက်တဲံ software တွေကို http://wardrive.net/wardriving/tools မှာ ရနိုင်ပါတယ် ။
Posted by P Kyaw Swa at 9:11 PM